:: My Little World ::: Sun Java Certification eB00k
Posted by Nay Nay Naing at 1/09/2009 10:20:00 AM
SCJP အတွက်က ပထမစာအုပ်နဲ့တင် တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီ။ Kathy Sierra နဲ့ Bert Bates ရဲ့ဒီစာအုပ်က စာမေးပွဲဖြေမယ့်သူတွေ အတွက်အထောက်အကူ အများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။
SCWCD အတွက် တင်ထားတဲ့စာအုပ်ကမှားနေပါတယ်။ CX-031-081 အတွက်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ old version ပါ။ အသစ်က CX-031-083 ပါ။ Head First Servlet and JSP ဆိုတဲ့ Kathy Sierra ရေးတဲ့စာအုပ်က တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကျနော့်မှာရှိတာက ဖိုင်ဆိုဒ်တအားကြီးနေတယ်။ 65MB လောက်ရှိတယ်ဗျ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။
SCJP က ပထမ တစ်အုပ်နဲ့ အတော်လုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဖြေတုန်းကလည်း အဲဒီ တစ်အုပ်ကို အခြေခံပြီး သူငယ်ချင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေရယ် တခြား သိချင်တာလေးတွေရှိရင် စာအုပ်တွေမှာ လိုက်ရှာဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ SCWCD စာအုပ်နဲ့Exam Number ကိုလည်း အမှန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ Head First Servlet and JSP ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရှိလို့ တင်ပြီး post ကို update လုပ်လိုက်မယ်။ အခုလို မှားနေတာလေးတွေ ထောက်ပြပေးတာ၊ လိုနေတာလေးတွေ သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..ကျွန်မ Java6ဖြေဖို့လုပ်နေတာ..ပျင်းနေတာနဲ့ စာမဖတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာ.။
Friday, January 09, 2009 2:09:00 PM
Thank you for your ebook. They are very useful.
PS:Please check once again for the Head first Servlet and JSP.
Friday, January 09, 2009 6:26:00 PM
Thiha Thit said...
Thanks for Sharing ebooks.
Pls check the link for Head first Servlet and JSP ebook. I think there is no link for that.
Friday, January 09, 2009 9:02:00 PM
ကျွန်မ နေ့ လယ်က အလုပ်ကနေ စာအုပ်တင်ပြီး ပိုစ့်ကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားတာ အဆင်မပြေ ဖြစ်သွားတယ်။ အခု Download Link ကို ပြန်ပြင်ထည့်လိုက်ပါပြီ။
Saturday, January 10, 2009 1:13:00 AM
SHE (Wesheme) said...
Thanks for your sharing.I have done JP,WCD,BCD in 2005.I need to revise now for job.Thanks again.